Markab sida shixnad gargaar oo ka yimid Turkiga oo ku soo xirtay Dekeda Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Markab sida shixnad gargaar oo ka yimid Turkiga oo ku soo xirtay Dekeda Muqdisho
Waxaa goor dhow Dekeda Muqdisho ku soo xirtay Markab sida shixnad gar-gaar ah, kaasoo horaantii bishan ka soo shiraacday dalka Turkiga, iyadoo Markab uu sido 11,ooo oo Tan loogu tala galay abaaraha iyo dhibaatooyinka heysta Hooyooyinka iyo dhalaanka Soomaaliyeed.
Markabkan ayaa waxaa markii uu ku soo xirtay Dekeda Muqdisho lagu wareejiyay Mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Hey’adda Musiibooyinka deg dega ee Turkiga ayaa sheegtay in Markabkan sida gargaarka loogu tala galay in lagu caawiyo dadka Soomaaliyeed ee heysta dhibaatooyinka xaga bani’aadanimada.
Shixnadan ayaa lagu wadaa in dhowaan loo gudbiyo gobolada dalka ee dhibaatooyinka bani’aadanimada ka jirto, waxaana Saraakiil ka tirsan dowladda ay xaqiijiyeen in gargaarkii u horeeyay ee Turkiga ka yimid la gaarsiinayo dadkii ku barakacay fatahaada wabiga Shabeelle ee ka sameeyay Beledweyn.
Turkiga ayaa horay kaalmo bani’aadanimo u soo gaarsiiyay Soomaaliya, waxaana uu ahaa dalkii u horeeyay ee soo gurmaday, markii abaarihii iyo macluusha ku dhifteen Koofurta Soomaaliya sanadkii 2011.
Wakiilka Midowga Afrika oo booqday xarunta dhaqan celinta dhalinyarada ka soo baxsata Al-Shabaab